विषय मा स्कूल निबंध "युद्ध र शान्ति"
उपन्यास मा "युद्ध र शान्ति" टोलस्टोय धेरै वर्ष को लागि उसलाई पाऱ्यो गरेको सबै सामाजिक र व्यक्तिगत समस्याहरू उठायो। को Decembrists बारेमा गर्भवती थियो उपन्यास। तर यो उत्पादन, जो मात्रा को सद्गुण द्वारा, चित्र को एक किसिम रूसी जीवनको एउटा विश्वकोश सकिन्छ बाहिर गरियो। समस्याहरू एक विषय "युद्ध र शान्ति" मा एक निबंध समर्पित गर्न सकिन्छ, लेखक रोशनी।
उपन्यास लेखक सिर्जना उहाँले एक कलाकार र अग्रगामी रूपमा काम गरे। विषय "युद्ध र शान्ति" मा एक निबंध रूपमा यस्तो कार्य को कार्यान्वयन लागि तयारी मा, काम को प्लट-compositional विशेषताहरु ध्यान गर्नुपर्छ। टोलस्टोय गरेको महाकाव्य उपन्यास कुनै षड्यन्त्र, को उन्नाइसौँ शताब्दीमा समय परिचित साहित्य हो। यो संरचना र षड्यन्त्र ऐतिहासिक घटनाहरू र दार्शनिक समझ संघर्ष narrative underlies जो कारण।
विषय मा एक निबंध "युद्ध र शान्ति" केन्द्रीय तस्बिरहरू को विरोध को एक विश्लेषण हुनुपर्छ। आखिर, यो उपन्यास संरचना को antithesis आधारित छ। शान्तिपूर्ण समाज सैन्य गर्न विरोध गर्नुभयो। नेपोलियन - Kutuzov। सांसारिक समाज प्रति Bezuhov, राजकुमार एन्ड्रयू जस्ता वर्ण गर्न विरोध यसको गलत जीवन मान संग।
टोलस्टोय organically ऐतिहासिक उपन्यास, महाकाव्य निबंध mores र इतिहास को सुविधाहरू जोडती एक काम सिर्जना गरियो।
रूसी लेखक मात्र होइन पौराणिक लडाई को एक ज्वलन्त तस्वीर सिर्जना गरेको छ, तर पनि लड प्रवाह संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को भित्री संसार देखाए। विषय "युद्ध र शान्ति" मा एक निबंध अक्सर उन्नाइसौँ शताब्दीको ठूलो ऐतिहासिक तथ्याङ्कले को छवि समर्पण छ। पुस्तक एक शानदार सैन्य कमान्डर Kutuzov, mediocre अष्ट्रीया सामान्य Mack समावेश गर्दछ।
टोलस्टोय गरेको निबंध "युद्ध र शान्ति" फाइदा र अद्वितीय कलात्मक सुविधाहरू धेरै छ। यसलाई उज्ज्वल र succinct तस्बिरहरू साहसी कमान्डरहरु र भ्रष्ट careerists र कायर साहसी सैनिकहरू सैन्य शीर्ष मा न्यानो र सहज स्थिति कब्जा छ।
शीर्षकहरू निबंध "युद्ध र शान्ति" अत्यन्तै विविध छन्। र खोल्न तिनीहरूलाई प्रत्येक एक महान प्रयास गर्नुपर्छ: गर्न आलोचना को मूल, काम, प्रारम्भिक उन्नाइसौँ शताब्दीको युद्ध बारे ऐतिहासिक काम पुन: पढ्नुहोस्।
Kutuzov: "युद्ध र शान्ति"
टोलस्टोय गरेको निबंध सामाजिक विकास, इतिहास र दर्शन सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति हो। लेखकले लागि अध्ययन विषयको पौराणिक ऐतिहासिक तथ्याङ्कले भयो। प्रोभिडेन्स इच्छा संग ऐतिहासिक घटनाहरूको लगातार जडान मा विश्वास मा आधारित छ जो शिक्षा एक प्रकारको - यो दार्शनिक digressions मा रूसी क्लासिक providential जोर। , युद्ध मा अध्याय मा केन्द्रिय स्थान दुई antipodes कब्जा - Kutuzov र नेपोलियन।
रूसी कमान्डर - एक अद्वितीय व्यक्तित्व। उहाँले अनावश्यक भाषण, केही आफ्नो उपस्थिति मा एक साधारण सिपाहीले resembling भन्न गर्दैन। Kutuzov आफूलाई र युद्धभूमिमा र सैन्य परिषद रहनेछ। 1812 को युद्ध अगाडि प्रमुख राजनीतिक तथ्याङ्कले संग बराबरीको यो व्यक्तित्व राखे।
उपन्यास को historicity
के टोलस्टोय गरेर उपन्यास मा एक लिखित कागज मा भन्नुभयो गर्न सकिन्छ? शीर्षकहरू निबंध "युद्ध र शान्ति" वैविध्यपूर्ण छन्। तर कुनै कुरा के सम्बन्धित रूसी लेखक को काम मा परिप्रेक्ष्य को प्रकारको, ऐतिहासिक स्रोतहरू परिचित हुनुपर्छ। क्यारियर Kutuzov कसरी गुना? प्रारम्भिक उन्नाइसौँ शताब्दीको सैन्य र ऐतिहासिक घटनाहरू मा आफ्नो भूमिका? यी प्रश्नहरूको "युद्ध र शान्ति" को उत्पादन गर्न, को पाठ्यक्रम, छन्। लेखन उपन्यास को अनुभव र वृत्तचित्र पुस्तकहरू देखि आएको जानकारी आधारित लिखित गर्नुपर्छ। यो दृष्टिकोण सम्भव ठूलो रूसी लेखक को, सामाजिक राजनीतिक र आध्यात्मिक स्थिति बुझ्न बनाउँछ।
उपन्यास मा, यो ऐतिहासिक वर्ण - यो बुर्जुआ क्रान्तिकारी, एक despot, एक विजेता। फ्रान्सेली सम्राट महिमा र बडाई सँगसँगै। नेपोलियन मात्र होइन फ्रान्स तर संसारभरि प्रशंसा। आफ्नो शक्ति भयानक, तर आकर्षक थियो। बाक्लो फ्रान्सेली कमान्डर हेलो झूटा महानता देखि plucked। र उहाँले आफ्नो डायरी मा प्रविष्टिहरू द्वारा प्रमाणित, जानाजानी लेखक यसलाई गरे।
नेपोलियन टोलस्टोय "मान्छे को executioner।" भनिन्छ ठूलो मानवतावादी पाठक मा भएको क्रूरता सफाइ र हिंसा मात्र संसारको र आफूलाई बारेमा साँचो प्रतिनिधित्व गुमाएको छ जो एक हुन सक्छ भन्ने विचार प्रभावित खोजे।
एक तथ्यलाई एक नेपोलियन को इतिहास मा सबैभन्दा ठूलो संख्याले एक अस्वीकार गर्न सक्दैन। को झल्काउँछ जो जो सिर्फ एउटा बहु काम छैन एक निबंध, - "युद्ध र शान्ति" महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरू। यो पनि नेपोलियन गरेको महानता भयानक शक्ति जलाएर छ कि सार्वजनिक विश्वस्त गर्न प्रयास छ।
एक टोलस्टोय को उत्पादन को सबै भन्दा रोचक काम - रूसी अभिजात वर्ग प्रतिनिधिहरूलाई बेहोरा। उपन्यास मा सांसारिक समाज को विवरण धेरै महत्त्व दिइएको छ। यो आफ्नै नियमहरू, भन्सार र परम्परा द्वारा जीवित, एक विशेष संसार छ। पहिलो कुरा गर्दा पुस्तकहरू पढेर आफ्नो आँखा परिहाल्छ कि - affectation, affectedness सांसारिक समाज को प्रतिनिधिहरु। तिनीहरूले जो राजनीति र कला को समाचार छलफल चाल सबै प्रकारका, मा खर्च अधिकांश समय। तर आफ्नो कुराकानी प्रकृतिका यांत्रिक छन्। यो समुदाय को सदस्यहरु प्रत्येक यसको भूमिका खेल्छ। Receptions, यी मानिसहरूलाई निरन्तर बोल्न, तर प्रत्येक अन्य सुन्न छैन।
पाठक राम्रो सक्रिय किशोरी अघि उपन्यास वर्ण को सुरुमा। कि पुस्तक देखा घटना समयमा, यो परिवर्तन, यो बढ्दैछ। Natasha लागि जीवन को अर्थ - प्रेम। तर Bolkonski संग जानेबेलामा को समयमा त्यो गल्ती बनाउँछ। अन्तमा, यस महाकाव्य छवि अन्तमा टोलस्टोय गरेको आदर्श स्त्रीको समझ मा निहित छन् भन्ने सुविधाहरू मा लिन्छ। विवाह र प्रसब यसलाई आफ्नो पूर्व सौन्दर्य र प्रकाश हराउछ। तर, उत्तरदायी स्वभाविक निष्कपट रूपमा। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अब Natasha पूर्ण आफूलाई परिवार दिन्छ। को निबंध-तर्कमा पुस्तकको अन्य heroines यो छवि तुलना लायक छ।
यो वर्ण को छवि पनि महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भइरहेको छ। पियरे आध्यात्मिक खोज मा छ, जीवन को अर्थ को लागि खोज। उहाँले सांसारिक receptions मा पराई देखिन्थ्यो। Bezuhov falsity वरिपरि Reigning, अस्वाभाविक महसुस, affectedness। उहाँले सावधान, खाजिनिति गर्ने मन। र यो गुण उहाँलाई सांसारिक receptions मा एक mindless यांत्रिक कुराकानी नेतृत्व गर्न अनुमति छैन। तर, यो अप्रिय छ कि समाज को हटाउनु गर्न, यो सम्भव Bezukhi चाँडै छ। साहित्यिक नायक को छवि - टोलस्टोय गरेर उपन्यास मा निबन्धहरू लागि अर्को विषय।
टोलस्टोय गरेको निबंध "युद्ध र शान्ति" - विभिन्न मान्छे देखाइएको छ जो एक पुस्तक। तर कारण सामाजिक परिस्थितिमा, तिनीहरू अझै पनि बलियो बन्धन छ। असामान्य सहानुभूति टोलस्टोय संग Bolkonski गर्न। गुणस्तर, यो परिवारका सदस्य को विशेषता - Patriotism, उदारता, कर्तव्य को अर्थमा। यस सांसारिक समाज को अन्य सदस्यहरु विपरीत, तिनीहरूले समय idly खर्च छैन। Bolkonskis लेखक को उदाहरण सही परिवारको आफ्नै विचार प्रकट गर्छ।
कोमलता र कठोरता को राजकुमार Nikolai अचम्मको संयोजन। नायक को सिद्धान्त अनुसार मुख्य सद्गुण, - मन र गतिविधिहरु। यो एक बाक्लो पुस्तकमा मुख्य मध्ये एक छ किनभने रूसी लेखक र मानवतावादी कामहरू मा निबंध मा, परिवार मान को एक विषय विकास गर्न आवश्यक छ। रचनात्मक गतिविधि पनि महाकाव्य उपन्यास वा दोस्रो को विशेषता, तर कुनै कम रोचक वर्ण मा परिदृश्य समर्पित गर्न सकिन्छ।
पात किन पहेलो बिरुवाहरु बारी। किन पहेलो बारी र पात गिरावट
Generative अंग। संयंत्र को generative अंग के हो?
किन यति भनिन्छ हप्ता दिन हो। बच्चाहरु को लागि हप्ताको दिन
क्यापेक्यानाभेरल। को ताराहरु नजिक
क्रेडिट को पत्र - यो कठिन, तर धेरै विश्वसनीय छ
पिताजी Gueye - सेनेगलकी फुटबल खेलाडी tsentrbek क्लब "Aktobe"
रूसी संघ को आपराधिक कोड: अपराध को अवधारणा
क्रास्नोडार मा ठूलो माछा पकडने: सशुल्क मनोरंजन केन्द्रहरु
यदि कस्तो आवाज पायो?
सबैभन्दा राम्रो "Maynkraft" (सर्भर) के हो
भान्सा "थोमस" कैंची: ग्राहक समीक्षा र मूल्य। वास्तविक मूल्य कैंची "थोमस" के हो?
"कप्तान छोरी" रूप Pushkin समाज, प्रेम, युद्ध। "कप्तान छोरी" को पुस्तक समीक्षा
सैलुन तातो कैंची समीक्षा र सिफारिसहरू
यो क्रिया "गिल्ला" - एक कठबोली वा मूल रूसी शब्द?
बिरालोहरु मा Tartar: गराउँछ, उपचार, रोकथाम